ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းပေါ်လူတွေကျဲလှ ဒီနေ့မှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းပေါ်လူတွေကျဲလှ ဒီနေ့မှ
ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းပေါ်လူတွေကျဲလှ ဒီနေ့မှ
Posted by kalink on Jun 15, 2012 in Myanmar Gazette, Opinion - Op-ed | 42 comments
ဒီနေ့ထွက်နေကြအတိုင်း လမ်းပေါ်ထွက်ပီး လိုင်းကားတိုးစီးလာခဲ့တာ.. တယ်ကံကောင်းလှပါတယ်အောင်းမေ့မိတယ်။ ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ထိုင်ခုံလဲအဆင်သင့်ရတာခင်ဗျား…။ ဟော..လှည်းတန်းဘက်ဖြတ်လာတော့လည်း လူတွေရှင်းနေတာဘဲ..ကားတိုးစီးမဲ့သူတောင်မရှိဘူး..။ ကြာလှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ လှည်းတန်းပွိုင့်တောင် ဘယ်လိုဖြတ်ခဲ့မှန်းမသိဘူး..မြို့ထဲကို ခဏချင်းရောက်လာတယ်။ ဟော မြို့ထဲရောက်တော့လည်း…လူတွေရှင်းနေလိုက်တာမှာဘဲ…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် အားငယ်မိတယ်။
ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှေ့မှ သတိထားမိတယ် အောဒီနေ့က လူတွေလိပ်ပြာလန့်အောင် ကောလဟာလ သတင်းတွေလွင့်ထားတာကိုးလို့…။ ဘာဖစ်ဖစ် လာမဲ့ဘေး ..ကြိုရှောင်ထားတာကောင်းပါတယ်ဆိုပီး အိမ်ကနေမထွက်ကြတာနေမှာပေါ့ဆိုပီး စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်။ တချို့မိဘတွေလည်း ပေးမထွက်ဘူးဒီနေ့ ဘာဖစ်မယ် ညာဖစ်မယ်ဆိုပီး…။ ကျနော်တော့ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ပီး ရုံးကို အပြေးလာခဲ့တော့တာဘဲ။ လူအများ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများအား လိပ်ပြာလန့်အောင်လုပ်သူများ လူအများ လိပ်ပြာလန့်သလို သူ့တို့လဲ ပြန်လန့်ပါစေ…..
တပတ်လောက် ကြို …ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ နှိုးဆော်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေ ၊ အ ီးမေးလ်နဲ့ ဘလော့တွေကော့မန့်တွေက ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ …. ဒီ 15ရက်နေ့အကြောင်းကို အာဏာပိုင်တွေကလည်း … သတင်းရထားပြီးဖြစ်မှာပါ … ။ ဒီတော့မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်အောင် …. သတိရှိပြီး ၊ လုံခြုံရေး အထူးကြပ်မတ်နေကြပါလိမ့်မယ် … ။ စိတ်ပူတတ်တဲ့ လူတွေကတော့ … အပြင်သွားတာရှောင်နေကြတဲ့ အပြင်၊ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကိုလည်း … အပြင်ပေးမထွက်ကြောင်းကြားရပါတယ် … ။
ကျွန်မကတော့ …. အိမ်မှာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို စိတ်ပူပြီး ငြိမ်နေတာထက်စာလျှင် … အလုပ်လုပ်ရင်း ၊ အင်တာနက်သုံးရတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုသဘောကျမိလို့ ……… သာမန်နေ့တစ်နေ့လိုပဲ … ဒီနေ့ကိုကျော်ဖြတ်ဖို့ တွေးထားပါတယ် ။
ဟုတ်တယ်… ဟုတ်တယ်… ဒီနေ့ လူတွေသွားလာမှု နည်းလှချည်လားတွေးနေတာ…
လုံခြုံမှု ရှိတဲ့နေရာ (အိမ်)မှာ နေကြတော့ အန်ဒရယ်ကင်းတာပေါ့နော…
ဘာလို့များလူတွေက သူများတွေငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်နေတာကို မကြည့်ချင်ပဲ ကောဟလာလဖြန့်ချင်ရတာလဲမသိဘူး အဲ့လိုဖြန့်တဲ့သူတွေတစ်သက်လုံး လူတွေကိုကြောက်နေရတဲ.ဘဝရောက်ပါစေ….. စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျတာကိုတော်တော်ရွံတယ် …..
ဟိုဖက်ကလဲဒီဖက်ကိုလန်. ဒီဖက်ကလဲဟိုဖက်ကိုလန်. အားလုံ အယုံအကြည်ပျက်နဲ. တော်တော်လေးကိုအောက်တန်းကျတဲ.အပြုအမူပဲ…..
ခုတစ်လောလဲ အဲသာ မိုး တွေပဲ ကြားကြားနေရတယ်.. ပီးတော့ ဦးနီဖောင်း တွေနဲ့ လက်နက် တွေနဲ့ .. ၁ကယ်တော့ အဲလောက်ကြီး မလိုဘူးလို့ ထင်တာပဲ ..
(ဗိုလ်ကြီးတို့လည်း ရောက်လာရော ကျွန်မ တို့ရွာလည်း ပြာကျ ရော ဆိုတာ မျိုး လား မသိပါဘူး ) မလိုလို့ ထင်ပါတယ် .. အရေး အကြောင်းဆိုရင် ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ကို ပျောက် ကြတော့တာ …
ဒီနေ့ ဘာဖစ်မယ် ညာဖစ်မယ်ဆိုပီး…။
အဲ့လို ကြားတိုင်းသာ အပြင်မထွက်ရရင်တော့
ဒီတော့ ပြောချင်တဲ့သူ ပြောချင်ရာပြော
ဒို့တွေလဲ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ် ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့နော်…
ရန်ကုန်က အရေးအကြောင်းဆို တနေရာနဲ့တနေရာလဲ ဝေး
ရွာသားတို့ရေ တကယ်မသိလို့မေးတာပါ ဘာကောလဟာလ သတင်းလဲဆိုတာလုပ်ကြပါအုံး……
ဘာကောလဟာလဲ လဲတော့ မသိဘူး။
လောကကြီးနဲ့ အဆက်ဖြတ်လိုက်တာ နည်းနည်းကြာသွားလို့လား မသိဘူး ဘာမှကို မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ကောလဟလ ကတော့ …
အိမ်နောက်ဖေး ကို သွားကြည့် မောင်ဘိုဂျီး ကို တွေ့ရလိမ့်မယ် တဲ့…
ပီး …ငါး နဲ့ ခွန် ကြား ခြောက်ခြား မယ် ဆိုပဲဗျ….
ကျုပ် လဲ ဘာမှ မသိခဲ့ မကြားခဲ့သူ တစ်ယောက်မို့
ဘယ်လို လွှင့်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ပြောပေးကြဘာအုန်း
ထုံးစံအတိုင်း ကိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလ ပေါ့….
အကျယ်မရေးပါရစေနဲ့….။ တော်ကြာ ကျုပ်တို့ပါ လှုံ့ဆော်သူစာရင်းထဲ ပါသွားဦးမယ်…
သောကြာနေ့ ဗလီ မှာ မူဆလင် တွေလူစု တာ အဆန်းမှ မဟုတ်တာ ….
အခုတော့ ဆန်းကုန်ကြပြီ ကိုလုလင်ရေ… ဟိုနေ့က ဓာတ်ပုံဆန်းလေးမရလိုက်တာနာသဗျာ
အေးဗျာ … စာတွေ့ မဟုတ် လက်တွေ့ ဖြစ်သွားမယ် … ဟွန်း ..။
ကျနော်လည်း တနေ့က ရုံးက အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် စာရွက်မဲတရွက်ဖတ်လို်က်ရတာဘဲ… ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ဘာညာ ဘာညာ ဘလာ ဘလာ တဲ့…ဘာမှမဖစ်လောက်ပါဘူးလေဆိုပီး ဒီနေ့ရောက်လာတာဘဲ… ဘာဖစ်ဖစ် ရွာသူရွာသားတွေအားလုံး အသိ သတိလေးနဲ့ သွားလာတာအကောင်းဆုံးပေါ့… ကျနောတော့ ရွေ့နေတဲ့ကျားကွက်ရဲ့အပြင်ကနေဘဲကြည့်တော့မယ်။
ယက်ရစ်ရေးချင်လျှင် … j မှာြရှိပြီး …… shift +m မှာြရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး … သတင်းပေးပါတယ် … ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော ်…….. ။
ဒီပို့်စ်ကိုဖတ်ရင်း ကော့မန့်တွေပါ အသံထွက်တဲ့အခါ ဖစ်ဖစ် ဆိုတဲ့စာလုံးနားရောက်လျှင် မြည်သံစွဲ အလင်္ကာကြောင့် ..ရည်ရွယ်ချက်မပါပဲ … ပြုံးစိစိဖြစ်မိလို့ပါ … ။
တူဒေး ဘုရားမရှိခိုးလာတာတောင် ထိုင်ခံရသမို့တယ်ကံကောင်းပါလားမှတ်တယ်..ဂလိုလား..
လမ်းဆုံမှာတော့ လုံခြုံရေးတွေ တွေ ့မိသဗျ..
မြို့တော်ခန်းမမှာ လုံထိန်းရဲ လုံခြုံရေးတွေအပြည့်ချထားတယ်။ဒီတခါပဲ သူတို့ကို အားကိုးတကြီး လေးလေးစားစား ကြည့်မိတယ်။ ဟီး….ဟီး ။ မနက်အိမ်ကထွက်ပြီး ကားစစီးတည်းက တမြို့လုံး လူကိုရှင်းလို့။ တပည့်မလေးကတော့ အိမ်ကမလွှတ်ဘူးထင်တယ်။ ဒီနေ့မလာဘူး။
ကိုယ်လည်း လာသာလာရတယ်။ မျက်စိရှင်ရှင်ထားပြီး ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ပဲ။
ဒီနေ့ရုံးကိုလာပေမယ့် အပြင်ထွက်ရမယ့် အလုပ်တွေရှိတယ်။ Cancel လုပ်ရင်ကောင်းမလားတော့ စဉ်းစားထားတယ်။ အခု Sky net မှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းလုပ်နေတယ်။ သူတို့လည်း အင်တာနက်၊ဖေ့ဘွတ်မှာ ဒီသတင်းတွေတွေ့တယ်။ သူတို့ကလုပ်မယ်လို့ပြောပေမယ့် သူတို့ဘာမှမလုပ်ကြောင်းနှင့် ကလေးသူငယ်တွေထိန့်လန့်နေတဲ့အကြောင်း သူတို့ရှင်းပြနေကြတယ်။ သူဌေးကြည့်နေတာကို နားစွင့်တာဆိုတော့ သိပ်မကြားရဘူး။ ဒါပေမယ့် Sky net မှတွေ့တဲ့ကုလားတွေက မုတ်ဆိတ်မွှေးလည်းမပါဘူး…။
ဒီနေ့မှာ ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေတော့ ကြိုကြားထားတယ်
ဒါပင်မယ့် ဒီသတင်းကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေက သတင်းရထားပြီးသားမို့
့နေရာတော်တော်များများမှာ လုံခြုံရေးတွေ ချထားတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်
နွယ်ပင်တို့နားမှာတော့ ပိုများမလားပဲ ဟိုနေရာမှာလည်း လုံခြုံရေး ဒိနေရာမှာလည်း လုံခြုံရေးနဲ့
တော်တော်များများကိုတွေ့ရတယ် ကြားရတဲ့ သတင်းကတော့ ဟုတ်မဟုတ်မသိပင်မယ့်
နွယ်ပင်တို့နားမှာ NLD ကနေတောင် လုံခြုံရေးတွေ ချထားပေးတယ်ဆိုလားပဲ …
ရုံးတက်တာမှ အင်တာနက်ကနေသတင်းအစုံသိရတယ်။ အိမ်မှာ ဘာမှမသိရဘူး ၊ အဲဒါကြောင့်ရုံးတက်တာ ။ (ခွင့်ယူရင် ပိုက်ပိုက်အဖြတ်ခံရမှာကြောက်တာလဲပါတယ်)
ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ထိပ်ဆုံးက ချမယ် အဲမှားလို့ ပြေးမယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. သူ့ရဲ့နို်င်ငံရေးပါဝါအပြည့်သုံးပြီး ဥရောပတခွင်လှည့်.. မြန်မာပြည်ထဲ.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေ.. လာခြင်းကောင်းသူတွေ..လာအောင်.အလုပ်လုပ်ကြအောင်… ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့.. လက်မထောင်နိုင်ဖို့.. အသည်းအသန်ကြိုးစားနေခဲ့တယ်..
ဆိုတော့.. ဒေါ်စုရဲ့..နာမယ်ကြီး Quote လေးတွေပဲရေးတော့မယ်..။
ဟုတ်ပ ကျွန်တော်မနက်ကလဲ ရုံးလာတော့ ဖယ်ရီစောင့်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတုန်း ဘေးက အစ်မကြီးတစ်ယောက် သူ.သမီးလေးကို ကျောင်းလာပို.တာ နောက်က သူ.ယောင်္ကျားနောက်ကလိုက်လာပြီး ဘာညာသတင်းကြားတယ်ဆိုပြီး သူ.သမီးရော သူမိန်းမရော ပြန်လာခေါ်သွားတယ်ဗျာ….. ကျွန်တော်တောင် ရုံးမတက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိသေးတယ် ပျင်းကလဲ ပျင်းနေတာ…ဒါပေမယ့် ဖယ်ရီရောက်လာလို. အခုတော့ အဟင့် ရုံးတက်နေရပါပေါ့လားးးးးးးးးးးးး B)
မြောက်ဒဂုံ 50ကွေ့နားမှာ အသံတွေကြားနေရပါတယ်
အမက (၄) အခုတော့ ကျောင်းရှေ့ကို ရဲတွေရောက်လာပြီလို့ သတင်းရပါတယ်
ပန်ပန်ကျတော မနက်ကဘီအမ်ကားမှာ လူပြည့်ပ့ါ
ဒါပေသည့် ရုံးကမြို့ထဲမှာဆိုတော့ တစ်ခုခုဖြစ်လို့အပြင်ထွက်မရရင် အဆင်ပြေအောင် သကြားလုံးတွေပိုထည့်လာတယ်
ဒီနေ့လည်းဖြေရှင်းရတာတော်တော်များတယ်။မြောက်ဥက္ကလာပမှာ ဖြစ်နေပြီတို့ ဆူးလေမှာဆိုတာဟုတ်လား
တို့ ခဏခဏ လာမေးနေကျလို့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြောနေရတယ်။ကြည့်ရတာပြည်ပရောက်မိုးသီးစွန်တို့
လိုကောင်တွေသတင်းလွှင့်နေလားမသိဘူး။ဒီကောင်တွေက အကောင်တွေအများကြီးနဲ့ ဖေ့ဘုတ်သုံးနေကျတာ။
သာမန်နေ ့တနေ ့လို အေးဆေးစွာကျော်လွှားသွားနိုင်ပါစေ။
ဟုတ်တယ်ဗျာ……ခုလေးတင်ပဲ အိမ်ပြန်ထမင်းစားတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့သမီးလေးတွေကိုတွေ့တယ်….ဒါနဲ့ ဟဲ့ညည်းတို့ ကျောင်းမတက်ဘူးလားလို့မေးတော့….သမီးတို့ကျောင်းကမြို့ထဲမှာဆိုတော့ ဒီနေ့မတက်ကြဘူးတဲ့……ခက်တာပဲဗျာ……တစ်ဆိတ်တစ်အိတ် နဲ့ အကုန်ထိခိုက်တယ်…………..
အခုလေးတင်ပြန်လာတာ လှည်းတန်းမှာ တောင်လူရှင်းနေတယ်.. အဟီ..။ ဒီလိုပုံစံ အတိုင်းဆိုရင်မဆိုးဘူး… ကားလည်းမကျပ်တော့ဘူး..:D
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် ယနေ့ မွန်လွဲပိုင်းမှ စတင်ကာထွက်ပေါ်နေသော သတင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ The Voice Weekly က သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများထံ မေးမြန်းခဲ့ရာ ကောလာဟလ သာ
ဖြစ်ကြောင်း အသီးသီးပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်၏ အခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလျှက်ရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အင်း… ခက်တော့ ခက်ကပြီ…….
ရုံးတက်လို့ 11 နာရီလောက်လဲ ကျရော ဟိုက ဒီက ကြားလာပီ… မြောက်ဒဂုံ က စလို့ သင်ဂန်းကျွန်း.. အင်းစိန်.. ဆူးလေ တွေမှာ ဟိုဟာဖြစ်နေပီဆိုတဲ့… မဟုတ်တဲ့ သတင်းတွေ ဘယ်လိုလူတွေကများ လွှင့်နေတယ် မသိ… ဗလီတက်ချိန်တော့ နေ့လည် 1 နာရီပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကြားတယ်…
အေးဆေးနေကြပါကွယ်…. မထိတ်သာ မလန့်သာ မလုပ်ချင်ကြဘာနဲ့လို့…
တခြားမြို့နယ်များတွင် ဘာတွေဖစ်နေလဲတော့မသိပါ..ဆူးလေတွင်တော့ လူတွေအများကြီး စုဝေးနေတယ်ဆိုတာတော့ သေချာတဲ့ သတင်းတစ်ခုပါ။
ဆူးလေမှာ ဆိုတော့ ဆူးလေဘုရား ဖူးမဲ့သူတွေ နေမှာပေါ့ကွယ်…
ဒီနေ့လောက် အေးဆေး လမ်းလျှောက်ပြီး ငေးချင်ရာ ငေးလို့ရတာ ဒီနေ့ပဲ ရှိတယ်။ ဪ လူတွေ လူတွေ ကြောက်တတ်လိုက်တာလည်း အလွန်ပဲ။ ကားစီးတော့ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ထိုင်ခုံတွေ ဘာတွေ တန်းရလို့ နောက် လမ်းလျှောက်တော့ လူတွေနဲ့လည်းမတိုက်နဲ့ မီးပွိုင့်တွေမှာ ကားကြောမပိတ်တော့ လမ်းကူးရတာ အဆင်ပြေလို့…
ဟမ် ..ပလပ်ဂင် အသစ်ဟ …
ဒီအချိန်အထိ ဘာအသံမှမကြားရဘူးဆိုတော့ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီနဲ့တူတယ်။
ဒါတောင် စောစောလေးက သံလျှင်က အမှတ်(၄) ကျောင်းကို မီးရှို့နေတယ်ဆိုပြီးကြားလိုက်သေးတယ်။
အခုထိ ဘာမှမဘာကြပါဘူးခင်ဗျာ။ အားလုံးအေးဆေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာလည်း ဘောစိကစိုးရိမ်ပြီး လမ်းကြောင်းမထွက်ခိုင်းဘူးဗျ။ အဲ ဒါပေမယ့် အလကားမထားဘူးဗျ။ ဂိုဒေါင်မှာ ပစ္စည်းတွေသွားရှင်းလိုက်ရလို့ ခါးကိုကိုက်သွားတာပဲ။
အဲဒီ ကောလဟလလွှင့်တဲ့ကောင်တွေ ထမင်းစားရင်း ခဲဝါးမိပါစေဗျာ။
ထင်သားပဲ….။ ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေ…….။ ဒို့ဗမာတွေ xxxx ပြမည် ……..xxxxx ပီပီ…။ ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲ မဟုတ်လား …။
ဘာမဟုတ်တာပြောတာ….ကားစီးရတာကျပ်သမှ….နာစီးတာ 3ကားး နော်..ဟီး